Itoobiya waxa ay leedahay 19% | Ethiopia Owns 19% Stake in DP World Berbera Port (Media Release) – Radio Daljir
Itoobiya waxa ay leedahay 19% | Ethiopia Owns 19% Stake in DP World Berbera Port (Media Release)
Maarso 1, 2018 8:48 g 0
War saxaafadeed ay maanta soo saartay shirkadda DP World ayaa markii ugu horreysay lagu shaaciyey in Itoobiya yeelatay 19% Dekedda Berbera meesha Dowladda Somaliland yeelatay 30%, DP World ayana ay yeelatay 51%.
Suldaan Axmed bin Suleyman, Guddoomiyaha shirkadda DP World, ayaa yiri, “waa ku faraxsanahay in Itoobiya qayb ka tahay mashruuca Berbera, maxaa yeelay waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 110 milyan. Dekedaha Berbera iyo Dooraleh waxa ay muhiim u yihiin dhaqaalaha gobolku oo ah mid sii koraya, mashaariicda dekedaha Berbera iyo Jabuuti-na waxa ay qayb ka yihiin hormarka la hiigsanayo. Sidaas darteed in Itoobiya ay Dekedda wax ku yeelato, noqotana saamile mashruuca waxa ay muhiim u tahay kor-u-qaadista ganacsiga iyo hiigsiga hormarinta Somaliland.”
In kasta oo War Saxaafadeedka maanta lagu soo qaatay magaca Dekedda Dooraleh ee Jabuuti, hadana waxaa xusid mudan in Jabuuti ay Qarameysay Dekedda Dooraleh, shirkadda DP World ayana ay dalkeeda ka mamnuucday.
Wasiirka Gaadiidka Itoobiya oo asna hadal kooban ku darsaday ayaa yiri, “Itoobiya waa ay sii maalgashan doontaa Jabuuti, sii wadi doontaa isticmaalka dekedda Jabuuti, sidoo kale waxa ay gobolka ka waddaa qorshayaal kale oo ay ku abuurto dekado kale oo qayb ka noqda hormarka gobolka.”
War saxaafadeedka kuma cadda waxa uu yahay qorshaha DP World ee Dekadda Bossaso, goorta ay bilaaban doonto shaqada Bossaso, sida loo kala leeyahay Dekedda Bossaso, iyo in Itoobiya ay sidoo kale saami ku leedahay ama ku yeelan doonto Dekedda Bossaso.
HALKAN RIIX War Saxaafadeedka oo dhammaystiran, kuna qoran afka Ingiriiska.
Hoos RIIX warar la xiriira Dekedda Berbera iyo qorshaha Itoobiya ee kala-qaybinta Soomaaliya:
Jabuuti iyo DP World iyo Casharka Berbera iyo Bossaso
Siyaasadda & Dhaqaalaha 478 Somalia News & Reports in English 247 Wararka 20327
Siyaasi Cabdisamad Abwaan ” Shaki ayaan ka qabnaa in Madaxweyne Gaas wakhti uu kororsado , waana khatar ” (dhegayso)